KATSAHO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHAMARINANY! – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juillet 30, 2015 Laisser un commentaire sur KATSAHO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHAMARINANY!
« Fa ny fanahy ana dia hampisotroiko, ary ny fanahy mihaosa rehetra dia ho vokisako. » Jeremia 31:25
Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro, be fitiavana Izy, fa saro-piaroka tsy mahazaka ny fijangajangana amin’ny andriamani-kafa. Talohan’izao fotoana eto izao dia nampiditra andriamanitra isankarazany ny Isiraely ka tafiditra tao avokoa ireo karazan’andriamanitra toa an’i Bala sy Astarta sy Moloka sy ny sisa…ary toa nifanome fotoana tao amin’ny tempoly ireo andriamanitra maro ireo. Tena niady tamin’izany fanompoana andriamani-kafa izany ny mpaminany Jeremia ary nanambara ny loza ho avy noho ny fahatezeran’Andriamanitra, nefa koa nanome fampaherezana ireo izay manantena an’i Jehovah izy rehefa mody avy any amin’ny fahababoana fa hisy ny fahasoavana avy amin’i Jehovah, dia izao, izay voalaza indrindra izao eto hoe: ny fanahy ana dia ampisotroina ary ny fanahy mihaosa rehetra ho vokisana. Mahagaga tokoa izao teny eto izao, fa izay fanahy ana sy ny fanahy mihaosa ihany no no noresahin’ny Tompo hampisotroina sy hovokisana. Ny tsy mangetaheta sy ny fanahy matanjaka izany tsy nasiana resaka.
Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokisana! Mat 5:6. Ny ambaran’ny Soratra Masina moa dia i Kristy no làlana sy fahamarinana ary fiainana. Raha izany dia miompana amin’ny fananana an’i Jesosy Kristy ny hetaheta sy ny hanoanana, ary izay tahaka izany no vokisana. Andriamanitra mihitsy no hamaly izany hetaheta sy hanoanana izany. Ny ao amin’ny Filazantsara araka ny
Matio, Jesosy dia manambara ny mba hanasana ny malahelo, sy ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba.fa tsy izay afaka mamaly anao. Ny tokony ho toetrantsika eo anatrehan’Andriamanitra! Tokony ho raikitra ao anatintsika ny hetaheta sy ny noana ny fahamarinana, hetaheta an’i Jesosy Kristy, fa raha izany marina no hetahetantsika dia hovokisana tokoa isika, mila mizara koa isika rehefa nahazo, satria nahazo maimaimpoana. Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra! Hampahery anao anie ny Tompo!
Publié parfilazantsaramada juillet 30, 2015 Publié dansUncategorized